भाइरल बनाउने प्लानिङ थियो ? तर विवादपछी गजेन्द्रले खोले सबै कुरा (भिडियो सहित):: Mero Desh
भाइरल बनाउने प्लानिङ थियो ? तर विवादपछी गजेन्द्रले खोले सबै कुरा (भिडियो सहित)
Published on: २० चैत्र २०७७, शुक्रबार ०२:०५
अहिले चियावालीको उपनामले सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल बनेकी नुवाकोटकी सृष्टि तामाङ जो आफ्नो दुई वर्षको आफ्नो दुधे बालकलाई आफ्नो पिठ्युँमा बोकेर रातको तीन बजेदेखि चिया बनाउँदै र बेच्दै आउनुभएको छ । उहाँको सं’घर्षको यो दृश्यलाई गोदावरीका एकजना फोटो पत्रकार गजेन्द्र राज नेम्बाङले सामाजिक संजाल मा’र्फत सेयर गर्नुभयो र यो दृश्य यतिबेला संसारभर भाइर ल बन्न पुग्यो।
सामान्य व्यापार गरेर चिया बेच्दै गरेको मान्छे यस्तो चर्चा पाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ,’ एकदमै खुसी लागिरहेको छ,यस्तो हुन्छ भनेर सपना पनि देख्या थिइन। यत्रो सबै दाजुभाइ,दिदीबहिनी,आमाबुबाहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर खासै आशा पनि गरेको थिइन । यति धेरै माया गरिदिनुभएको छ।उहाँहरू सबैलाई मनदेखी नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ‘
उहाँ बिहान राती तीन बजेदेखि नै आफ्नो बच्चा पिठ्युँमा बोकी चिया बेच्नुहुँदो रहेछ । उहाँको माइतीघरतिर दिदी बहिनीहरू भएतापनी घरपटी चाहिँ खासै कोहि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले सुनधारामा सानोतिनो ठेक्कापट्टा गर्नुहुँदो रहेछ।
उहाँले भन्नुभयो कि,’ मेरो श्रीमानले अब घर फर्किन्छु त भन्नुभयो मलाई तर यस्तो दुखमा छोडेर जानुभएको छअब म कसरी उहाँलाई स्वागत गरौं ? मलाई उहाँले यस्तो चोट मा छोडेर जानुभयो।मेरो त मनदेखी नै चित्त दुख्या छ। त्यो चोट अहिले तत्काल बिर्सिहाल्न नसकेको हुँदा अहिले नै हत्तपत्त स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ।’
बिशेषत: लकडाउनको कारणले उनीहरूबीच बाँच्ने उपाय खोजी गर्ने क्र’ममा टाढिने अ’वस्था आएको भएतापनी यसरी जिम्मेवारविहीन बन्नु हुँदैन थियो एउटा श्रीमान हुनु को नाताले । जतिसुकै दुख सं’घर्ष गरेतापनि साथमै रहेर गर्नुभएको भए मलाई यति चोट पर्दैनथियो। उनले बताइन् ।भिडियो:- Ekhabar online Nepal